Life in Fukuoka "Nepali" Vo.51ブログ | LOVE FM - 76.1MHz FM RADIO STATION
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.82
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.81
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.80
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.79
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.78
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.76
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.75
आवास（住宅） , अन्य（その他） , प्राकृतिक प्रकोप（災害）
तपाईंहरुले कहिल्यै जापानी प्रोफेशनल बेसबल हेर्नु भएको छ?
प्रोफेशनल बेसबल जापानमा धेरै लोकप्रिय खेल हो। १२ टोलीहरू सेन्ट्रल लिग र प्यासिफिक लिगमा विभाजित भई, जितको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन्। पहिले त, लिगमा पहिलो स्थानको लागि लक्ष्य राखिन्छ, र अन्तत दुई लिगमा पहिलो स्थान पाउनेले जापानको सर्वश्रेष्ठ उपाधि पाउँछ।
फुकुओका शहर, प्यासिफिक लिगमा आबद्ध भई Fukuoka SoftBank Hawks को मुख्य आधार हो।
पक्कै पनि स्टेडियम चाहिं, Fukuoka PayPay Dome!
Hawks, पाँच बर्ष लगातार जापानमा सर्वश्रेष्ठ बन्ने दृढता बोकेको बलियो टीम हो।
२०२१ मार्च २६ (शुक्रवार) देखि प्रोफेशनल बेसबल शुरु हुँदैछ। यदि मौका मिलेमा, पक्कै पनि प्रत्यक्ष प्रोफेशनल बेसबल हेर्नुहोला!
【नागरिक विपद् रोकथाम दिवस】
फुकुओका शहरमा, सन् २००५ मार्च २० मा गएको फुकुओका प्रान्त पश्चिम अपतटीय भूकम्पको अनुभवलाई नबिर्सन मार्च २० लाई "नागरिक विपद् रोकथाम दिवस" को रूपमा तोकिएको छ।
विपद् कहिले आउँछ भनेर थाहा हुँदैन।
विपद् आईपर्दा, प्रत्येक व्यक्तिले उचित कार्य अपनाउनका लागि, दैनिक आधारमा तयारी गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
फुकुओका शहरको वेबसाइटबाट Hazard Map वा विपद् सम्बन्धि जानकारी लिने, आश्रय लिने स्थानमा जाँदा लिएर जानुपर्ने सामान पहिलेदेखि तयारी र जाँच गरि राख्ने गर्नुहोस्।
Support for Foreign Residents भनि खोज्नु भएमा, विदेशीहरूका लागि विपद् रोकथाम जानकारी देख्न सक्नुहुन्छ।
नियमित रुपमा महत्वपूर्ण जानकारी संकलन गर्ने गर्नुहोस्।
"नागरिक विपद् रोकथाम दिवस" ​​को अवसरमा, आफू, आफ्नो परिवार र समुदायको सुरक्षाको लागि विपद् रोकथामको बारेमा सोचौं।
【बिदाको दिनमा खुल्ने बारे】
मार्च र अप्रिलमा बसाईसराई धेरै हुने भई, वार्ड अफिसको काउन्टरमा भीड हुने समय हो।
त्यसकारण, सप्ताहका दिनहरूमा व्यस्त भई प्रकियाका लागि जान नसकेका महानुभावहरुले, बिदाको दिनमा बसाईसराई प्रकिया गर्न सकिने गरि मार्च २८ र अप्रिल ४ आईतबार, वार्ड कार्यालय र शाखा कार्यालयका काउन्टरहरू खोलिनेछन्।
बिहान १० देखि दिउँसो २ बजे सम्म, भित्र बसाई, बाहिर सराई र बसाईसराई सम्बन्धि सूचना स्वीकार गर्नेछौं।